Salaadda Ciidda Masiixiga amarrada Awoodda Sarakicidda | QODOBADA LAGU SAMEEYO
Bogga ugu weyn Dhibcaha salaadda Salaadda Ciidda Masiixiga Amarka Awooda Sare
Salaadda Ciidda Masiixiga Amarka Awooda Sare
Roomaanka 8: 11:
11 Laakiin haddii Ruuxii kii Ciise kuwii dhintay ka soo sara kiciyey idinku dhex jiro, kii Ciise Masiix kuwii dhintay ka soo sara kiciyey, jidhkiinna dhimanayana ayuu ku noolayn doonaa Ruuxi idinku dhex jira.
Dabaaldegga Istaaga waa xilligii sannadka ay dhammaan dadka Masiixiyiinta ah ee adduunka oo idil isugu yimaaddaan xuska dhimashada, aasidda iyo sarakicidda Rabbigeenna Ciise Masiix. Dhacdadan waxaa badanaa la sameeyaa hal mar sanad kasta. Si kastaba ha noqotee, Masiixiyiin badan ayaan fahmin sababta dhabta ah ee fududeynta, ma yaqaanaan sababta aan ugu dabaaldegno aasitaanka dhimashada iyo sarakicidda Masiixa Ciise. Maanta waxaan ku mashquulineynaa ducooyin fudud, amrayo awooda sarakicidda.
Sababta Masiixiyiintu wax qiimo ugu leedahay maanta waa awooda sarakicidda. Bawlos isaga oo ka hadlaya 1 Korintos 15: 16-21, wuxuu si kooban inoogu sheegayaa in rajadeenna Masiixiyiintu ay tahay sarakicidda Rabbigeenna Ciise Masiix. Ciise wuxuu u dhintay dembiyadeenna awgooduna wuxuu u dhintay kuwii dhintay xaqnimadayada iyo ammaantayada. Masiixiyaddu waa ka badan tahay diinta maanta maxaa yeelay Ciise Masiix weligiis wuu nool yahay. Kahor intaanan u galin salaadaha fudud maanta, aynu eegno muhiimadda khafiifka.
Muhiimadda Ciidda Masiixiga: Awoodda Sarakicidda.
Muhiimadda ay leedahay fududeynta ayaa noo sheegaysa muhiimadda dabaaldegga fudud, sababta aan ugu faraxsanahay xilligan. Tani waxay sidoo kale kaa caawin doontaa inaad fahanto waxa aad u taagan tahay inaad ku hesho sidii adoo ah rumaystaha mar kale dhashay natiijada Masiixa.
1. Ninka ayaa laga xoreeyay Dembiga weligiis:
Ciise wuxuu u yimid dunidan dembiilayaasha, wuxuu naftiisa u bixiyay dembiyadeenna, wuuna ka soo sara kacay kuwii dhintay inuu marag weligiis ah uga helo xaqnimadayada. Sarakicidda Masiixu wuxuu dammaanad ka qaaday in ninku gebi ahaanba xor ka yahay dembiga. Dembigu mar dambe ma haysto xukunka nin. Dembi kastoo aad gashay oo aad waligaa dembaabto waa Ciise Masiix waa la cafiyey.2 5 KORINTOS 17: 21-XNUMX wuxuu inoo sheegayaa in Ilaah hadda uu isagu adduunkii kula heshiiyo xaggiisa Masiixa oo isagu mar dambe denbiyadooda ku xisaabtami doonin. Si kastaba ha noqotee, markii aad u timid Masiixa, Ruuxa Quduuska ahi wuxuu kaa caawinayaa inaad ku noolaatid nolol xaq ah.
2. Binu Aadamku wuu ka xorreeyay cudurrada iyo cudurada:
Dhimashadii Ciise, waad ku bogsatay. Ciisena sidoo kale sarakiciddiisa aawadeed wuxuu ka wada qaaday dhammaanteen cuduro. Jirrooyinka jidhkaaga awood kuma laha. Nolosha Ilaahay hadda waxay kugu jirtaa adiga oo rumeeysan. Mar dambe ma noqon kartid dhibbane jirro iyo cudurro. Sidaa darteed haddii aad jirro ku aragto jirkaaga, bilow inaad diiddo magaca Ciise Masiix.
3. Badbaadintu way u diyaar ahayd ragga oo dhan:
Sarakiciddii Masiixu waxay badbaadinta u diyaarisay dadka oo dhan. Masiixu wuxuu u dhintay inuu badbaadiyo dadka oo dhan, taas macnaheedu waa in nin kasta oo dhulka jooga, badbaadada waa u bilaash dhammaantood. Kaliya kuwa rumaysta ayaa ka faa'iidaysan kara badbaadadan bilaashka ah. Masiixu wuxuu ina siiyay hadiyadda ugu weyn ee nolosha, Badbaadada. Ciise wuxuu ku bixiyay qiimaha ugu dambeeya badbaadadeenna, oo waa dhimashada. Imminka kuwa rumaysta Ciise Masiix way badbaadi doonaan weligood. Yooxanaa 3:16.
4. Ninka waxaa lagu caddeeyey inuu xaq yahay xagga Masiixa:
Masiixu wuxuu noo noqday xaqnimada, 2 Korintos 5:21. Waxa uusan ninku ku guuleysan karin xoogiisa iyo go'aankiisa, waxa uusan ku gaari karin sharciga, Masiixu wuxuu u sameeyay aadanaha. Maanta, haddii aad mar kale dhalato, waxaad tahay xaqnimada Ilaah ee Ciise Masiix ku jirta. Ma aha xaqnimadaada laakiin tan Masiixa ee kugu jirta. Ilaah Masiixa aduu weligiis kaamil kaaga dhigay.
5. Ninkii waxaa loogu dhawaaqay wiilasha Ilaah:
Waxaa laynaga dhigay Wiilashii Ilaah Masiixa, sarakicitaankiisii ​​wuxuu inagu soo celiyey ilaahay, dhiigiisuna wuxuu inaga dhigay daa'in weligeen dembiyada oo dhan oo daahir ahaada ilaah hortiisa. Haddaba innagu waxaynu nahay wiilashii Ilaah xagga Rabbigeenna Ciise Masiix. Yooxanaa oo ka hadlaya 1 Yooxanaa 3: 1, wuxuu yidhi "fiiri nooca Jacaylka ah ee Aabbuhu ina siiyay ee naloogu yeedho wiilashiisa" Masiix ayaa taas ka dhigay, sidaa darteed haddii aad mar kale ka dhalatay rumaystaha maanta, waxaad tahay Wiil Ilaah. Halleeluuya
Sidee ayaan u amrayaa Awoodda Sarakicinta
Jawaabtu way fududahay, salaadda. Waxaan diyaariyey 20 salaadood oo fudud oo kaa caawin kara inaad amri karto awooda sarakicidda noloshaada. Dhimashada, aasida iyo sarakicista Masiixa ayaa ina siisay guushii cadowga ee dhinacyada nolosheena oo dhan. Sidaa darteed waa inaan ku sheegnaa salaadaha oo aan sheegnaa sida aan u dooneynno nolosheena. Masiixu wuu kuu dhintey durba, uma sii sii noolaan kartid nooc kasta oo dulmiga ah. Ka faa'idayso salaadahan fudfudud maanta oo maanta xakameeya awooda mugdiga noloshaada maanta.
1. Aabe, waan kuugu mahadnaqayaa sidii aad Ciise uga soo sara kacday kuwii dhintay si aad u noolaatid weligaa
2. Aabe, waad ku mahadsantahay soo iibsashada Masiixa ee ku yimid xoogga dib-u-kicinta
3. Aabo, waxaan cadeynayaa in awooda sarakicidda, aan ka madaxbanaannahay dembiyada magaca Ciise
4. Waxaan cadeynayaa in xoogga sarakicidda, aan ka madax banaanahay cudurro iyo cudurro magaca Ciise.
5. Waxaan cadeynayaa in xoogga sarakicidda, wax hub ah oo aniga iga dhan ah aan magaca Ciise lagu guuleysan doonin.
6. Waxaan cadeynayaa in xoogga sarakicidda, in aan ka madax banaanahay nooc kasta oo dulmiga jinniyo magaca Ciise ah.
7. Awoodda sarakicidda, dhimashada wax awood ah kuma leh nolosheyda magaca Ciise
8. Masiixu wuu sara kacay, sidaa darteed wax kasta oo noloshayda ku dhintay, waxaan kugu amrayaa inaad dib ugu laabatid nolosha magaca Ciise
9. Awoodda sarakicidda, badbaadadayda waxaa lagu aasaasay Masiixa magaca Ciise.
10. Waxaan cadeynayaa inaan ku socdo fadhiga Eebbe magaca Ciise.
11. Waxaan cadeynayaa inaan ku socdo caafimaadka rabbaani ah magaca ciise
12. Waxaan cadeynayaa inaan ku socdo barwaaqo rabbaaniga ah magaca Ciise
13. Waxaan cadeynayaa inaan ku socdo xigmadda Masiix magaca Ciise
14. Waxaan cadeynayaa in nooca nolosha ee 'zoe' ee ilaah uu aniga igula shaqeynayo magaca Ciise
15. Waxaan cadeynayaa inaan amar ku bixinayo joogitaanka Ilaah meel kasta oo aan ku tago magaca Ciise
16. nimcada Masiixu waxay ku shaqaysaa noloshayda magaca Ciise
17. Awooda Ilaah way igu shaqaysaa magaca ciise.
18. Waxaan sheegayaa, in noloshaydu ay layaab ku tahay dadka dhexdeeda magaca Ciise.
19. Waxaan cadeynayaa inaan awood u leeyahay dhamaan awoodaha mugdi ee kujiro magaca Ciise
20. Aabe, waxaan kuugu mahadnaqayaa xoogga Sarakicidda Masiixa ee magaca Ciise.
article Previous50 Salaad Habeen Oo Lagaga Soo Horjeedo Dib U Dhaca Guurka
Next articleDucada Si Looga Badbaado Oo Laga Siiyo Weerarka Cadowga
BAFANA LAHAA MOKOENA Abriil 5, 2019 XXX: 8 pm
U soo duceeya isbeddel dhaqaale
Qodobbada Salaadda ee Dhulka Sare
30 Qodobbada Salaadda ee Awoodda leh ee Nabadda
Qodobbada Salaadda ee ka dhanka ah sixirka xun